आफ्नो सन्तानको अगाडी कसरी गर्ने यौ-नको कुरा?अनिबार्य पढ्नुहोस::Nepal's Digital Paper
आफ्नो सन्तानको अगाडी कसरी गर्ने यौ-नको कुरा?अनिबार्य पढ्नुहोस
यौ*नको कुरा भन्नसाथ तपाईलाई लाग्न सक्छ, यस्तो विषयमा के बात गर्ने ? वा यस्तो पनि लाग्न सक्छ, आफ्नै बच्चासँग कसरी यौ-नको कुरा गर्ने ?
अहिलेका बच्चाहरुमा समयभन्दा अगाडि नै यौ_निक परिपक्कता बढ्दो छ । बिगतमा १२ वा १३ बर्षपछि मासिक स्राव सुरु हुन्थ्यो भने, अहिले ८ वा ९ बर्षको उमेरमै यो प्रक्रिया सुरु हुने गरेको छ । स्तन एवं यौ-नाङ्को विकास पनि कम उमेरमै हुन थालेको छ ।
यसमा एउटा मात्र जवाफ छैन । अहिलेको हावापानी, खानपान, प्रविधिको सुलभता जस्ता थुप्रै कारणले यसमा भूमिका खेलेको छ । तर, बच्चाहरुमा जसरी यौ-निक परिपक्कता आएको छ, त्यसलाई स्विकार्नका लागि उनीहरु मानसिक रुपले भने तयार भइसकेका छैनन् । समस्या यहिँ छ । त्यसैले अहिलेका अभिभावकले बच्चालाई सही समयमा यौ-न-परामर्श दिन आवश्यक छ ।
बच्चासँग यौ-नको कुरा
बिगतमा यौ-नको कुरा गर्नुलाई ‘छाडा’ वा ‘लाजमर्दो’ भन्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिलेको समाजमा यस्ता धारणा बद्लिएका छन् । यौ-न, यौनाङ्ग, यौन-स्वास्थ्य, प्रजनन-प्रक्रिया आदिबारे खुला छलफल गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ पनि ।
किनभने, अहिलेका बच्चाहरुलाई सही समयमा यौनबारे जानकारी दिइएन भने, उनीहरुमा मनोविकार बढ्न सक्छ । उनीहरुमा यौ*नकुण्ठा बढ्न सक्छ । यौ-नजन्य कुराले उनीहरुमा चिन्ता र बेचैनी बढ्न सक्छ । त्यसैले सही समयमा बच्चालाई यौनको बारेमा आवश्यक जानकारी दिनुपर्छ । तर, कहिले सुरु गर्ने त ? अर्थात बच्चा कुन उमेरको भएपछि यौ-नको कुरा बुझ्न सक्षम हुन्छन् ?
अभिभावकले अब बच्चालाई सानै उमेरमा यौ-नको कुरामा जानकारी दिलाउनुपर्छ । यौ-नाङ्गको विकास एवं परिवर्तनसँगै हुने विभिन्न शरीरिक उथलपुथलबारे बच्चालाई मानसिक रुपमा तयार राख्नुपर्छ ।
यौ-नाङ्गको परिवर्तनलाई लिएर बच्चाहरुमा भया वा भ्रम पैदा नहोस् । मासिकस्रावको बेला उनीहरु हतास नहोस् । यस्ता प्राकृतिक प्रकि्रयाबार उनीहरुलाई समयमै जानकारी दिलाउनुपर्छ ।
सामान्यत ७-८ बर्षको उमेरमा बच्चाहरु कुरा बुझ्ने भइसकेका हुन्छन् । उनीहरुलाई यहि समयमा यौ-न-परामर्श दिन उपयुक्त हुन्छ ।
कसरी दिने यौ-न परामर्श ?
यौ-नाङ्मा हुने परिवर्तन, स्तनको आकार बढ्ने, रौं आउने जस्ता प्रक्रिया बारे पनि बच्चालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
अक्सर बच्चाहरुले आफु परिपक्क हुँदै गएको भेउ पाउँदैनन् । तर, कति वयस्क व्यक्तिहरु उनीहरुसँग नजिकिने, छुने, चलाउने गर्न सक्छन् । आफ्ना यौ-नकुण्ठा मेट्नका लागि बच्चाहरुसँग नजानिदो ढंगले नजिकिने, विभिन्न प्रलोभन देखाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुको नियत खराब हुनसक्छ भनेर पनि बच्चालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ ।
अलि किशोरवयमा पुगेपछि छोराछोरी विपरित लिंगप्रति आकषिर्त हुन्छन् । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । यद्यपी यसबेला उनीहरुले आफ्नो होस गुमाउन सक्छ वा उनीहरुमाथि यौ-न दू-र्व्यवहार हुनसक्छ । त्यसैले किशोरवयमा पुगेका छोराछोरीलाई यस्ता कुरामा सर्तक गरानुपर्छ ।
Email : Laliguras[email protected]